Akaụntụ Azụmaahịa Forex - Akaụntụ Forex kacha mma, Mepee Nnabata Akaụntụ Ugbu a na FXCC
Ụdị Akaụntụ Ụdị Forex
Na FXCC, anyị na-enye ọtụtụ ihe ndekọ ECN ka ha wee kwado ndị ahịa niile. N'agbanyeghị ọkwa gị
ahụmahụ ma ọ bụ ọchịchọ, anyị kwenyere na anyị nwere akaụntụ ziri ezi maka gị.
ECN Standard akaụntụ
kacha nta nkwụnye ego 10,000 - 100,000 Ego ego a na-enweta EUR, USD, GBP ngwá egwú 30 Gbasaa si 0.1 Tinye ya aka 1: 200 Nke kacha nta 0.01 Izu ike Expert etozu Ozi Amụma Free SMS VPS efu Free Economic Kalinda Free Technical Analysis Ngwa ahia ahia Akaụntụ Akaụntụ Onwe Onye
AKWỤKWỌ akaụntụ ECN ugbu a
kacha nta nkwụnye ego 100 - 10,000 Ego ego a na-enweta EUR, USD, GBP ngwá egwú 30 Gbasaa si 0.1 Tinye ya aka 1: 300 Nke kacha nta 0.01 Izu ike Expert etozu Ozi Amụma Free SMS VPS efu Free Economic Kalinda Free Technical Analysis Ngwa ahia ahia Akaụntụ Akaụntụ Onwe Onye
ECN Advanced akaụntụ
kacha nta nkwụnye ego 100,000 + Ego ego a na-enweta EUR, USD, GBP ngwá egwú 200 + Gbasaa si 0.1 Tinye ya aka 1: 100 Nke kacha nta 0.01 Izu ike Expert etozu Ozi Amụma Free SMS VPS efu Free Economic Kalinda Free Technical Analysis Ngwa ahia ahia Akaụntụ Akaụntụ Onwe Onye
* Okwu & Ọnọdụ na-emetụta
Malite na Akaụntụ ahia ahia ego
Ma onye ahia ohuru ma ọ bụ nke nwere ahụmahụ, ndekọ ego nweere onwe ya dị ize ndụ bụ ụzọ dị ukwuu isi nweta uru nke
ECN ahia na FXCC.
Mee ihe omuma ahia ahia gi ma obu nwaa uzo ohuru na ego efu.
Ọnụahịa oge na ezigbo ahịa ahịa
Ịnweta nhazi usoro ahịa Metatrader4 zuru ezu
Lee chaatị, akụkọ na nyocha
Mee ahia na $ 10.000 ego nlekota oru
AKWỤKỌ ECN DEMO akaụntụ
Ihe akaụntụ ECN XL nwere atụmatụ niile na uru ị ga-atụ anya ma rịọ n'aka onye na-azụ ECN / STP, bụ onye na-emezi mgbe ọ bụla ọ na-eme ka ọrụ mmepe. Onye nlekota ahia nke nyeworo aka imetuta ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ. Na eziokwu na FXCC anyị kwenyere na akaụntụ ECN a abụghị isi. Ọ bụ otu n'ime akụkọ ahịa kachasị elu, juputara na atụmatụ na uru, dị ugbu a na ụlọ ọrụ mbụ.
Na FXCC anyị na-ejikarị ụkpụrụ nke anyị kwadoro kemgbe ọtụtụ afọ; "site na obere acakss oké oaks ga-eto". Onye ọ bụla ahịa ECN malitere ebe ọ bụ ya mere onye ọ bụla FXCC ahịa na-emeso dị ka onye, ​​VIP, onye ga-enwe ọrụ nke onwe, na-enweghị ọrụ nke ọrụ. Ndị ahịa nwere ike mepee akaụntụ ECN XL na naanị $ 500 ma nwee ụdị ọkwa nkwado zuru ezu na ọrụ dịka ma ọ bụrụ na ha bụ onye ahịa VIP. Ị ga-enwe mmasị na ntinye aka ruo 1: 200 ma ị ga-enwe ike iji usoro ECN / STP nke ahia azụmaahịa anyị nyere aka ịsụ ụzọ.